Nwa nkịta ọla edo ahụ ọ ga - agbaze obi gị? - Reeddịrị
Nwa nkịta ọla edo ahụ ọ ga - agbaze obi gị?
A na-akpọkwa Great Pytreiver, nkịta Golden Pyrenees bụ gafee n'etiti Golden Retriever na Great Pyrenees . Intelligentdị nnukwu ọgụgụ isi a jikọtara ya na oke ya.
A na-emepụta ụdị osisi a site na ịgwakọta ụdị anụ ọhịa abụọ a ma ama maka iguzosi ike n'ihe na ịhụnanya maka ndị nwe ha. Chọpụta ihe banyere nnukwu Pyrenees Golden Retriever mix n'okpuru.
Akụkọ banyere Pyrenees Ọlaedo
Dị ka onye mmebe nkịta , Great Pyrenees Golden Retriever mix adịghị amata site na American kennel Club.
Agbanyeghị, ọ bụ American Canine Hybrid Club, Design Regreed Registry, Designer Dogs Kennel Club, Dog Reginal America, Dog Registry of America yana International Reginal Canine Registry kwenyere ụdị nkịta a dị ebube.
Iji ghọtakwuo banyere Golden Pyrenees, ọ dị mkpa ilekwu anya na ndị nne na nna nke osisi a.
Na a akụkọ ihe mere eme na ụbọchị n'ụzọ nile azụ Bronze Age, na Akwa Pyrenees ejiriwo ihe a na-ekwu na ọ bụ onye a ma ama dị ka nkịta na-elekọta anụ ụlọ na ugwu Europe.
Tupu mgbanwe ahụ, ụdị a biri n'ọtụtụ ọmarịcha French Chateaux.
N'ezie, Nnukwu Pyrenees bụ onye ama ama n'etiti ndị ama ama France na narị afọ nke 17 na Eze Louis nke Iri na Anọ kpọkwara ụdị aha ahụ nkịta mba nke France .
Nkịta ndị a arụọla ọrụ ọtụtụ afọ n’ugwu France na-enyere ndị ọrụ ugbo aka ichebe atụrụ ha n’aka nkịta ọhịa.
Obere obere anụ oriri ha na-eme ha nkịta dị ebube maka ichebe anụ ụlọ dika ha adighi-achu igwe aturu n'onwe-ha.
Ha nwekwara ogbugbo na-eto eto nke ha ji eme ka ndi nwe ha mata ndi ha na amabughi.
Uwe mkpuchi ha buru ibu na-enyekwa ha nnukwu nchebe na ebe dị elu ha maara na-arụ ọrụ.
Ndị agha France na WWII jikwa nnukwu azụ Pyrenees mekwaa ndị nkịta a ka ha ziga akwụkwọ dị mkpa.
N'afọ 1933, ndị American kennel Club nabatara ụdị a.
Ezigbo ezinụlọ, Ntughari ọla edo bụ ndị a hụrụ n'anya gburugburu ụwa maka ọdịdị egwuregwu ha na mmetụta ịhụnanya ha.
Dị ka otu n'ime ụdị nkịta kachasị ewu ewu n'ime ụwa, a pụrụ ịchọta agbụrụ nke agbụrụ ọlaedo a na Obodo Border n'etiti England na Scotland, ebe a na-azụ ndị Golden Retrievers maka ebumnuche ịchụ nta.
Ndị dinta hụrụ ha n'anya nke iweghachị ụzọ dị nro dịka nkịta ndị a nwere ike weghachite ufe n'emebighị mmebi ọ bụla.
Onye mepụtara Golden Retriever bụ Lord Tweedmouth bụ onye jiri ụdị azụ ndị ọzọ na-azụlite ọla edo nwere ntutu isi anyị maara ma hụ n'anya taa.
Aha mbụ a kpọrọ Flatcoats bụ akpọrọ Golden Retriever na 1920 ma bụrụ Amara site na aha nke American Kennel Club na 1925.
Taa, yana ịbụ ezigbo anụ ụlọ, a na-ejikwa Golden Retrievers mee ihe ọrụ nduzi, nsuso, na nchọpụta .
Kedu ihe Pyrenees nke ọla edo dị ka ya?
Otutu kariri onye nne na nna ya ochie, Pyrenees nke nwere okike miri emi, ukwu di ike, na a regal stance .
Ahụ nke kwesịrị ekwesị bụ r ectangular nwere isi gbara gburugburu featuring nghọta pendant ntị na a mbara nwa imi.
Anya nke ngwakọta Great Pyrenees Golden Retriever bụkarị ọchịchịrị na agba na nke almọnd, na-egosipụta okwu anya .
Uwe mkpuchi ahụ dị oke ma sie ike na nku na ụkwụ na ọdụ yana na mgbakwunye, ị ga-ahụkarị ajị ajị anụ n'olu nke Pyrenees Golden.
Zute Nero, Pyrenees ọlaedo - Isi ihe onyonyo
Kedu ka nnukwu Pyrenees Golden si enweta?
Nnukwu nkịta a guzo nso 25-30 sentimita (63 ruo 76 cm) ogologo ma dịkwa arọ 75 rue 120 (kilogram 35 ruo 54) .
Ọ bụrụ na anaghị achịkwa nri ha, ngwakọta Golden Pyrian Great Pyrenees nwedịrị ike iru 2 dị ịtụnanya 20 kilogram (100 n'arọ) !
Nkịta ndị a too incredibly ngwa ngwa mgbe ha dị naanị ọnwa atọ, ha nwere ike iguzo dị sentimita iri anọ na ise n'ogologo.
N'ozuzu, nwoke Pyrenees Golden ga-adị ogologo ma sie ike karịa ndị ibe ha, ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị.
N'ihi oke ha, Pyrenees Golden bụ adabaghị nke ọma n'ụlọ obibi ha ga-acho ugbo ma obu ulo nwere ezi ulo nchebe ebe ha nwere ike itinye oke ike ha.
Fluffy ọlaedo Pyrenees - Isi ihe onyonyo
Uwe nke Akwa Pyrenees Golden Retriever mix
Ndị nkịta nne na nna nke obe a ga-enwe mmetụta dị ukwuu na uwe ahụ. Ọ bụrụ na Pyrenees Golden gị weghaara nne na nna Pyrenees dị ukwuu, uwe ha ga-adị arọ ma yie ajị anụ, ebe nne na nna Golden Retriever ga-atụnye uwe silkier, uwe dị nro.
Kedu ụzọ ọ bụla, uwe nke obe a ga-achọ nlebara anya dịka obere uwe ime ejiri jikọtara ya na ogologo mkpuchi ogologo nwere ọchịchọ nke ịchọta na ịnakọta irighiri ihe.
Pyrenees nke ọla edo abụghị naanị ọla edo dịka aha ya na-egosi ma n'eziokwu nwere ike ịbata ọtụtụ agba site na ude na-acha odo odo na isi awọ ma ọ bụ oji, ọcha, ma ọ bụ ọbụna aja aja.
Iwe: Ndi Pyrene Golden bụ ezigbo nkịta?
Gafe Golden Retriever na Great Pyrenees na-ebute nkịta na-egwu egwu na enyi. Umu anumanu abuo a nwere mmuta nke nne di ike, nkita a di ndu na nkasi obi di nma na-echebe ezinụlọ ya .
Ma mgbe ndị na-eche nche na ndị na-eche nche, Golden Pyrenees chọrọ onye ndu siri ike, dị jụụ onye ma etu esi emebe onwe ha dika alpha
Onye nwe nkịta oge mbụ ma ọ bụ onye dị nwayọọ nwere ike isiri ike ịchịkwa nke a ọmarịcha ìgwè onye ga-eleghara onye isi adịghị ike anya.
Trainingnọgide na-enwe ọzụzụ oge niile dịkwa mkpa na ngwakọta Golden Retriever Great Pyrenees, dị ka mmekọrịta oge mbụ. N'ihi akụkọ banyere nne na nna ha dị ka nkịta na-eche nche, ngwakọta a nwere ike ịkpachara anya maka ndị bịara abịa.
N'ihi ya, ụdị a nwekwara ike irite uru na ụlọ akwụkwọ nrubeisi doggy ebe ha na ndị nkịta na ụmụ mmadụ ndị ọzọ nwere ike ịkpakọrịta.
Otu na-emekọrịta ihe, nkịta ndị a nwere mmasị igwu egwu nke ukwuu na ọ bụrụ na ịnweghị igosi ha nlebara anya ha nwere ike gbanwee omume na-ebibi ihe .
Omume ha na-eme mkpọtụ pụkwara ịpụta na ụmụaka ụmụaka ma ọ bụ ndị agadi na-ahụ Pyrenees Golden ahụ dị ike ma sie ike nke ukwuu.
Lelee egwu egwu Pyrenees Golden Retriever na-egwuri egwu na snow na vidiyo a mara mma:
Ilekọta Great Pyrenees Golden Retriever mix
Dị ka obe nke ụdị nkịta nwere ọgụgụ isi abụọ, Golden Pyrenees chọrọ ndụ ndụ ebe enwere ike buru ha ibu na ike ha di elu.
N'ihi akụkọ ihe mere eme ha dị ka nkịta ugwu ugwu nke Europe, nke a na-enyekwa nke ọma mma maka gburugburu ebe oyi.
Na-emega ahụ Golden Retriever Great Pyrenees mix
Pyrenees nke ọla edo chọrọ mmega ahụ kwa ụbọchị na otutu oge igwuri egwu. Nke siri ike awa ma ọ bụ abụọ nke ịgagharị kwa ụbọchị , ya na oge egwurie egwu n’ụlọ ga-enye aka itinye ume nile ahụ.
Nkịta a ga-ahụ ezinụlọ na-arụ ọrụ n'anya ọ ga-atọ gị ụtọ isonyere gị na jog ma ọ bụ ọbụlagodi maka igwu mmiri.
Agbanyeghị, n'ihi akwa ha, jide n'aka na ịghara imegharị nkịta a na anyanwụ maka ogologo oge.
Ọ kachasị mma ịga nkịta gị n'ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie mgbe ọ naghị ekpo oke ọkụ ma ị nwere ike ịchọta ndo.
Ọzọkwa, lezie anya inye nkịta gị mmiri zuru oke n'oge mmega ahụ.
Izute Nori, Golden Retriever na Great Pyrenees mix - Isi ihe onyonyo
Na-eri nkịta gị
Nnukwu nkịta na-achọ nri dị ukwuu! Ọ bụrụ na ị kpebie inweta Golden Retriever Pyrenees mix iji kpọọ onwe gị na-atụ anya ka ị na-azụ nkịta buru ibu ma ọ dịkarịa ala iko anọ ma ọ bụ ise kwa ụbọchị .
Ma ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịdị ka ọtụtụ ọ dịkwa dị mkpa ka ị ghara imeri ìgwè a dị ka Golden Retriever nne na nna nwere ike ịpụta na crossbreed gị nwere ike ịdị oke oke na oke ibu.
Jide n'aka na ị ga-elele ọtụtụ nri na ọgwụgwọ ị na-enye nkịta gị ụbọchị niile ma buru nke a n'uche mgbe ị na-arụ ọrụ nri ụbọchị ha.
Pyrenees ọla edo edozi
A na-achọ ejiji mgbe niile ma na-ehicha anya iji chekwaa uwe mara mma nke Pyrenees Retriever gị.
A choro ihichapu kwa ụbọchị na eto eto nke ndụ nkịta gị mgbe ọ ka na-etolite ebe nkịta toro eto na-achọ naanị nchacha otu ugboro n'izu.
Mgbe ị na-ehicha ahụ na-elekọta gburugburu ebe ndị nwere mmetụta dị ka ọdụ.
Pyrenees Golden gị ga-abụ na-awụsa mgbe niile ma site na ịfụfụ ugboro abụọ n'afọ na mgbanwe oge. N'oge a, a ga-achọ ịmịcha ezé ọzọ iji gbochie uwe elu ha abụọ na matting.
Ichefu uwe ahụ ga-enye aka mee ka pup gị jụụ na ihu igwe ọkụ.
Ihicha ezé mgbe niile na mkpụcha ntutu na-abụkwa ihe eji achọ mma maka nkịta niile mana dịka Golden Pyrenees nwere dewclaw na-a closea ntị na mpaghara a n'ihi na ndị a nwere ọchịchọ imerụ ahụ, iwe, ma ọ bụ ọbụna dọkapụ.
Nnukwu Pyrenees Golden Retriever mix lifespan
Ogologo ndụ nke Pyrenees Golden na-anọdụ n’etiti afọ 10 na 13. N'ime ndụ ha, ụdị a nwere ike ibute ọrịa ụfọdụ a maara na-emetụta ụdị nne na nna ha.
A na-amata ndị na - enweta ọla edo ka ha nwee ike ịrịa kansa ebe ọrịa obi, nsogbu anya, hip, na nkwonkwo dysplasia na - emetụtakwa ha. Ọrịa Von Willebrand nke bu oria obara.
Nnukwu Pyrenees n'aka nke ọzọ nwere ike ibute dysplasia hip na ọrịa kansa yana luxel patellas na bloat.
N'ihi oke aji nke Akwa Pyrenees Golden Retriever, ụdị a nwekwara ike ibute nsogbu akpụkpọ, ọkachasị gburugburu ndị na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ.
Ego ole bụ nkịta Pyrenees Golden?
Ọ bụrụ n’ị na-achọ Pyrenees ọlaedo ịkpọ onwe gị, ị nwere ike ịtụ anya ịkwụ ụgwọ ihe ọ bụla $ 500 na $ 5000 .
Ndị nkịta nne na nna, ahụike nke nwa nkịta, na ogo nke onye na-azụ ihe ga-emetụta ọnụahịa gị dabere na ogo ya ma ọ bụ ọnọdụ ahụike ya.
Zute Willow, Golden Pyrenees nwa nkita - Isi ihe onyonyo
Great Pyrenees Golden Retriever mix ndị na-eme ihe
Ọ bụ ezie na nkịta a na-ejikarị ebu ọnụ ga-adị ọnụ ala karịa nne na nna ya dị ọcha, ụgwọ ndị Golden Retriever na Great Pyrenees nne na nna ga-emetụta ọnụahịa nwa nkịta.
Abụọ Golden Retrievers na Great Pyrenees na-efu ihe dị ka $ 500 na $ 5,000 na agbụrụ nke nkịta nne na nna ga-ekpebi ego nwa nkịta Golden Pyrenees ga-efu. Lee ụfọdụ ndị na-azụ ọla edo Pyrenees kwesịrị ileba anya:
Ujo Ezina Ulo
Mgbụsị akwụkwọ Creek Ranch
Pyrenees nke ọla edo
Great Pyrenees Golden Retriever mix maka nkuchi
Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ịnabata ngwakọta Great Pyrenees Golden Retriever, gbalịa lelee ụlọ ọrụ nnapụta pụrụ iche na Pyrenees ma ọ bụ ụdị nnukwu anụmanụ ndị ọzọ. Lee ụfọdụ ka ịmalite gị:
Akwa Pyrenees Rescue Society
Texas Great Pyrenees Nnapụta
Blue Bonnet Anụmanụ Anụmanụ
Umu anumanu ndi ozo di ka Pyrenees Golden
Ọ bụrụ na ị na-achọ nkịta yiri nke Golden Retriever ma ọ bụ Great Pyrenees ị nwekwara ike ile anya ụdị anụ ọhịa ndị ọzọ dị ka Onye Ọzụzụ Atụrụ Anatolian , Akbash ma ọ bụ Maremma .
Na mgbakwunye, a na-agafere Pyrenees Ukwu na ụdị anụ ọhịa ndị ọzọ yiri ndị na - eweghachi azụ, dịka nkata ma ọ bụ labrado, iji mepụta ụfọdụ ọmarịcha obe.
Kwesịrị ị nweta Golden Retriever Great Pyrenees mix?
Ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu nhọrọ maka ndị agadi ma ọ bụ obere ụmụaka, Golden Pyrenees ga-eme nke ọma maka ọtụtụ ezinụlọ.
Dị iguzosi ike n'ihe, ịhụnanya, na nchebe nke nnukwu ìgwè a na-eme ka Golden Pyrenees bụrụ ezigbo enyi na nkịta na-eche nche.
Otú ọ dị nkịta ndị a chọrọ onye nwe ụlọ siri ike ma kpebisie ike nke nwere ike ịchịkwa ha ma dịkwa njikere inye ha mmega ahụ ha chọrọ kwa ụbọchị.
45 Nkịta Agwo You Nwere Ike Tekụziri Nkịta Gị Mfe
The Corgi Beagle Mix: Ihe na - eme ma ndị mmadụ na - emegide ibe gị
nkịta nkịta German & labrador retriever mix
Dachshund German na -acha waya maka ọrịre
ego ole bụ French bulldog
aha nkịta dị mma maka ụlọ nyocha
isi awọ wolf German onye ọzụzụ atụrụ ngwakọ